တိုက်ပွဲများကြောင့် ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ကိုးခု၊ မြို့နယ် ၅၂ မြို့နယ်တွင် မြေမြှုပ်မိုင?? - Yangon Media Group
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခြင်း မရှိသေးသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ များနှင့်ဖြစ်ပွားသော တိုက်ပွဲများ၏ အကျိုးဆက်ကြောင့် ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ကိုးခု၊ မြို့နယ် ၅၂ မြို့နယ်တွင် မြေမြှုပ်မိုင်းအန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ကြောင်း လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန် လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးစိုးအောင် ပြော ကြားခဲ့သည်။ ယနေ့နံနက်ပိုင်း နေပြည် တော် မင်္ဂလာသီရိဟိုတယ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မိုင်းအန္တရာယ်အသိပညာပေးရေးနှင့် မိုင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးနေ့ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
”မြန်မာနိုင်ငံဟာ ၁၉၄၈ခုနှစ်မှာ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့သော်လည်း ယနေ့အထိ ပြည်တွင်းစစ်များနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များအချင်းချင်း တိုက်ခိုက်မှုများရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး၊ ယခုအထိလည်း အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ်မှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အား လုံး လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ ယင်းတိုက်ပွဲများရဲ့အကျိုးဆက်တွေကြောင့် ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီးကိုးခု၊ မြို့နယ် ၅၂ မြို့နယ်မှာ မြေမြှုပ်မိုင်းနှင့်မ ပေါက်ကွဲသေးသောစစ်ကျန်လက် နက်ပစ္စည်းများ၏ အန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အထူး သဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည် နယ်(မြောက်ပိုင်း)၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်တို့မှာ မိုင်းကြောင့် ထိခိုက်ခံစားရသူ အများအပြားရှိ နေဆဲဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဒုတိယဝန် ကြီးဦးစိုးအောင်မှ ပြောကြားသည်။
မိုင်းအန္တရာယ်အများဆုံးဖြစ်သည့် ကချင်ပြည်နယ်၊ ကယားပြည် နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)၊နှင့် ကရင်ပြည်နယ်တို့တွင်မိုင်း အန္တရာယ် အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ရန်အတွက် ပြည်နယ်အ ဆင့်မိုင်းအန္တရာယ် အသိပညာပေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့များကိုလည်း ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပြီး ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အ တွင်းပြည်နယ် ခြောက်ခုနှင့် တိုင်း ဒေသကြီးနှစ်ခုမှ လူဦးရေ သုံးသိန်း နီးပါးကို မိုင်းအန္တရာယ်အသိပညာ ပေးနိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ မိုင်းကြောင့်ထိ ခိုက်ခံစားရသူများ ကူညီထောက် ပံ့ခြင်းကဏ္ဍအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင်၂ဝ၁၇ ခုနှစ်မှစတင်၍ ယနေ့အထိ မိုင်းကြောင့်ထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိသူ ၄၉၉ ဦးအတွက် တစ်ဦးလျှင်ထောက်ပံ့ကြေး ငွေကျပ် နှစ်သိန်းနှုန်းဖြင့်စုစုပေါင်း ငွေကျပ် ၉၉၈ သိန်းတိတိကို မိမိတို့ဝန်ကြီးဌာန၏ ဘတ်ဂျက်ရန်ပုံ ငွေဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီးဖြစ် ကြောင်း ဒုတိယဝန်ကြီးမှ ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းနောက် နော်ဝေသံရုံးမှ သံအမတ်(မြေမြုပ်မိုင်းတားမြစ် ဖျက်သိမ်းရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ပဋိညာဉ်စာချုပ်အဖွဲ့-ဥက္ကဋ္ဌ)ံH.E. Tone Tinnes မှ ကြ်ိုဆိုနှုတ်ခွန်း ဆက်စကားပြောကြားရာတွင် ပြီးခဲ့သည့် ၂၂ နှစ်အတွင်းမှာ ၁၆၄ နိုင်ငံပါဝင်ခဲ့ပြီး မိုင်း ၅၁ သန်း ကျော်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီး နေရာအ ကျယ်အပြန့် အတော်များများကို ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ကြောင်း ဒေသခံတွေ ကိုလည်း နေရာတွေပြန်လည်အပ်နှံနိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ၁၉၉၉မှာ နိုင်ငံ ပေါင်း ၃ဝအပါအဝင် သူတို့ရဲ့နယ် မြေတွေမှာ မိုင်းတွေကိုအပြည့်အဝ ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပါကြောင်း မြန်မာ အပါအဝင် ၅၈နိုင်ငံလောက်ကမိုင်း ဒဏ်ခံစားနေရဆဲဖြစ်ပါကြောင်း၊ယင်း၅၈ နိုင်ငံထဲမှမြန်မာနိုင်ငံ အ ပါဝင် ၂၂ နိုင်ငံက မိုင်းဘန်ထွီကို ရေး လက်မှတ်ရေးထိုးရသေးခြင်း မရှိသေးပါကြောင်း၊ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် မှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးအနေအထားနှင့် မိုင်းကြောင့်လူပေါင်း ၂၇၉၃ ဦး သေဆုံးခဲ့ရကြောင်း သေဆုံးသူ တွေရဲ့ ၈၇ရာခိုင်နှုန်းမှာအရပ်သား များဖြစ်ပြီး သေဆုံးသည့်အရပ် သားထဲမှ ၄၇ရာခိုင်နှုန်းမှာကလေး သူငယ်တွေဖြစ်ပါကြောင်း ထည့် သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ယနေ့အခမ်းအနားသို့ ကုလသမဂ္ဂဌာနေညှိနှိုင်းရေးမှူးနှင့် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်း ရေးမှူး၊ နော်ဝေသံရုံးမှ သံအမတ် (မြေမြုပ်မိုင်း တားမြစ်ဖျက်သိမ်း ရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာပဋိညာဉ် စာချုပ်အဖွဲ့-ဥက္ကဋ္ဌ)၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးများ၊ တပ်မတော်အရာရှိများ၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှအရာရှိများ၊ ဌာန ဆိုင်ရာများ၊ NGOs၊ NGOs များတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိ ရသည်။
ချစ်သူရဲ့မွေးနေ့ ပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ကေတီဟုမ်း